Ukugcina ukutya okunzima kuyingozi: kungekudala okanye kamva uya kuphula. Kodwa ukuba ufuna ukutya ngokufanelekileyo, ngamanye amaxesha kufuneka utsho wena "cha". Indlela yokutya okulungileyo, indlela enempilweni yobomi-konke oku kupapashwa kwethu.
Ngokuqinisekileyo, kufuneka uqale ukutya, ngenxa yokuba ulambile, kungekhona nje ngokuba oogxa bakho babiza ukuba badle. Kodwa musa ukunyamezela indlala iminyaka engaphezu kwe-20. Emva kwakho konke, xa ufuna kakhulu, uyeka ukuzilawula kwaye ubambe into yokuqala efika kwamehlo akho kwaye akudingeki ukupheka: kwiifestile zasekhaya ezivela kwinqwelo, iimveliso ezigqityiweyo ezisuka kwisiqandisini, esitrato-esontwini kwintente esondeleyo. Ukongezelela, umntu olambile kakhulu uya kudla ngaphezulu. Ngoko zama ukuphuka phakathi kokutya kwakungekho ngaphezu kweeyure ezingama-5. Akunqatshelwe kwaye "kunqunywe ukunqwenela." Phuza iglasi yamanzi okanye i-snack nge-apula ngaphambi kokutya. Njengoko kuboniswe ngophando lwezinzululwazi zaseMerika, abafazi abadla i-apula ngaphambi kokuhlwa kwasemini badla i-k7 ye-kcal ngaphantsi kwesidlo. Ngethuba lesidlo ungasiphala amanzi ngamancinci amancinci. Kodwa kubalulekile ukuba umthamo wiselo otywalayo ungadluli kwi-1/3 yesantya sokutya esidliwe. Kodwa emva kokutya iyure awukwazi ukusela. Esesiswini, njengokwenziwa kwimizi yamachiza, izimo zilungiselelwe ukulungisa ukutya okudliweyo. Ukuhlaziya i-substrate kuthetha ukuphula ukutyalwa. Iglasi lokuqala lamanzi linxila emva kweeyure eziyi-1-1,5 emva kokutya, njengoko amanzi aza kufunwa ngokukhawuleza ngama-pancreas. Ezinye iimveliso, ezifana neidiliya, iklabishi, ubisi, zinokuqinisa intsebenzo yokuvumba emathumbu ngokwabo. Ukuxhuma nabo kwisidlo esinye, unokubangela isiphepho. Ngokukodwa xa udibanisa ukutya okunomsoco (utamatisi, i-cowberry) kunye ne-alkali (ubisi olufanayo). Kodwa ukuba kunjalo unobungozi bokufumana isisu esisodwa nje, ezinye "izibini" ziza kudibanisa iisentimitha zesinqe. Kudibanisa ukutya okunamafutha ane-high-carbohydrate. Isandwich nebhekoni, ikhekhe owenza ikhofi kunye nekhilimu. Ngoko umzimba uya kufumana amafutha kunye ne-carbohydrates. Ubuninzi babo buya kuba ngamafutha.
Bona, ngokunyanisekileyo, akubona isibini
Ukusela: itiye, ikhofi, iisero, iziphuzo zeziqhamo, i-compotes - ayihambisani kakuhle nokutya. Zikulungele kuphela iziqhamo, izithelo ezomileyo kunye neesekese ezilula njengethokolethi okanye i-marmalade. Kwezinye iimeko, unako ukuwasela imizuzu engama-30-40 ngaphambi kokutya okanye emva kweeyure eziyi-1-1.5, kwaye ukuba udle ukutya kweeprotheni - kungekudala kweeyure ezimbini emva koko. Iwayini, oyiphuza ngexesha lokutya, kwi-1 / 2-1 / 3 yiphucula amanzi. Ubunxila obunamandla bungenakunxila kwisisu esingenalutho, banokudakwa kancinci ngexesha lokutya okanye ekupheleni kwesidlo, njengokutya. Imithetho yokungenisa izihambi, eyavela ngexesha lokungabikho kokutya kwakuqhelekileyo, kuyimfuneko ukuba nayiphi na indwendwe, okokuqala, ukutya. Esi siko senza sikwazi ukuthetha etafileni namhlanje. Unxibelelwano kunye nokutya sele ziphantse zifana. Kodwa ungakhohlwa ukuba ukutya kuyindlela yokuqinisekisa ubomi bomzimba. Umzimba oza kuwugaya kwaye ususe konke okungafaniyo. Ngoko, umzimba kuphela unelungelo lokugqiba ukuba lixesha lini lokufumana esinye isahlulo sokutya, esichazela le ntliziyo yindlala. Kwaye le yeso sizathu sokuhlala etafileni. Zonke ezidliwayo ngenxa yezizathu ezithile, zikhokelela ekugqithweni kokugaya kunye neenkqubo ezidlulileyo zomzimba. Ukuba uyamenywa ukuba udle inkampani, kwaye awulambile, kodwa awukwazi ukungafuni, uhlale etafileni, uphuze amanzi kwaye uthethe ngempilo yakho!
Okokuqala, isisu namathumbu kuya kuba nzima ukujamelana nokutya okungafunekiyo. Okwesibini, usengozini yokuphucula. Ingqondo ikwaziswa ngokunyuka ngokunyuka kwinqanaba leeshukela egazini, kwaye ligqityiwe emva kwemizuzu emva kokuqala kwesidlo. Kuqikelelwa ukuba ngelixa umdli ophuzayo uya kuhlaziya oko akufumene kwifoloko enye, i-fastest will have time to pick up and send food to the mouth many times. Oku kuqinisekiswa ngophando olwenziwa ngabaososayensi baseYunivesithi yaseRhode Island. Emva kokufumana iqela lamavavolontiya amabhinqa, oogqirha bacetyisa ukuba badle isitya se spaghetti kunye noshizi kabini. Kanye-ngokukhawuleza kunokwenzeka, okwesibini - ngesantya sokuzola, ukuhlafuna ngokutya. Kwaye kwimeko yokuqala, amantombazana angama-9 emitha ayetyenziswe umyinge wama-646 kcal, kwaye kwi-kcal yesi-579 yekcal ibe sisiqingatha seyure. Kwaye emva kokuhlwaya ngokukhawuleza abathathi-nxaxheba belo vavanyo bakhononda ukuba balambile. Ngaba siqinisekisile? Ungalondolozi ixesha lokutya. Kwaye ukuba ufunde indlela yokukhawuleza ukugwinya ukutya, zama ukutshintsha ipoyiji nge dessert, kunye nefoloko ngeentsimbi zaseTshayina. Okokuqala, kuba kusishukumisela ukuba sithathe i-spoon sinelungelo kuphela umzimba, kungekhona ingqondo okanye iimvakalelo. Okwesibini, ngokuchasene nemvelaphi yoxinzelelo, kunzima ukugxininisa kwinkqubo yokutya ukutya, kwaye ngokuqinisekileyo uya kufikelela kunye nemali. Kwaye, ekugqibeleni, okwesithathu, ukucaphukisa okanye ukhathazeka, kunoko, ungakhethi isiqwenga sesonka esipheleleyo kunye nenkukhu ephekiweyo, kodwa into ekhethekileyo, enomnandi, enotyebileyo ... Olu khetho luphinda luqhutywe ngumzimba; ngokukhawuleza, "idinga" i-carbohydrate ngokukhawuleza kunye namafutha. Ukujongana nale ngxaki, kubalulekile, okokuqala, ukulungiselela ngokufanelekileyo ukutya. Ukuba ulambile amaxesha ambalwa ngemini, ungadli, ngoko umzimba uthintela izitolo ze-glycogen kwisibindi kunye nezihlunu ukuze ugcine inqanaba eliqhelekileyo le-glucose egazini. Emva koko ngexesha lokuxinezeleka, awuqinisekanga ngamandla kwaye uchithe ngakumbi xa uqhutywe kukuphazamiseka kunokungawukwazi ukukwenza ngaphandle kokulimaza impilo yakho. Emva koko udle yonke into ukuze uzalise "iindawo zokugcina amafutha". Kwaye ke, kubalulekile ukuba ufunde indlela yokuzonwabisa kungekuphela kokutya.
Ngokwezibalo, uhlambulula yonke into ebekwe kuyo. UTom udla izizathu ezininzi. Ukuba ngumndwendwe, akunakunceda ukushiya iqhekeza lekhekhe kwisitya ukuze ungakhubekisi umnini-mhlaba. Kwivenkile yokudlela kunzima ukulahla unyango, apho kufuneka uhlawule. Kwaye, ekugqibeleni, kukho abantu abathanda ukubeka izinto ngokulandelelana kuyo yonke indawo, kubandakanywa nesitya sokutya. Kubo, ukushiya into kuyo ayimkelekanga. Nangona kunjalo, akunzima ukusombulula le ngxaki. Esikhundleni seqhekeza elikhulu eliqhelekileyo thabatha elincinci lokutya. Ukutya kuye kungama-20% ngaphantsi. Kananjalo ungafundeli iphephancwadi, cima umdlali kwaye uthumele ingxoxo yeendaba owe waziva emva kwemini. Ngethuba lesidlo, kufuneka ugxilise kuyo kuphela, ziphulaphule, ukuhlaziya ukutya kwakho kwaye ekugqibeleni ungathumeli emlonyeni wakho. I-Cottage shiese kunye nenyama, umzekelo, kufuna imizamo eyahlukileyo yokuhlafuna. Ukuba "sihlala" kunye neTV, ngoko siya kugwinya ingcamango, zombini. Ukuba sigxininisa ekutya - siya kuziva ukuba kufuneka bafanele "ukugaya" kwaye nini na ukuyeka. Namela ingqalelo yakho. Ngelixa ulambile, i-flagrance iyakhanya, i-juicy, ukutya kuyonwaba. Ngokukhawuleza ukuba intliziyo ihambe (ziphulaphule!) Yaye ukutya kungabi nabuhlungu - uzele, umzimba awudingi ukutya kwakhona. Kwaye kungcono ukulibala malunga ne-dessert, njengesitya sokugqibela sokutya, ukuba ufuna ukutya ngokufanelekileyo. Iiswidi zihlala "zilala" kwizityalo, izityalo, inyama kunye neentlanzi. Ngako oko, linda emva kokudliwayo okungenani iyure nesiqingatha phambi kokutya i dessert. Ngokungafani nemifuno, iziqhamo ezininzi kunye nomzimba azihlanganisi. Zifuna inkqubo yokugaya iindidi "iinzame", i-acidity ye juice esiswini, i-enzymes. Kwaye enye into: isiqhamo kufuneka sidliwe kwiiyure eziyi-8. Yidla kwisahlulo sokuqala sosuku, basinika amandla, esiwachithayo emini. Yidla ngokuhlwa, xa umzimba ungasadingi inani elikhulu le-carbohydrate, lilala likhulu, lenze ukotya esiswini nasemathumbu.
Ezinye iziqhamo ezinomuncu kunye namajikijri, umzekelo, iirharnate, i-grapefruit, i-pomelo, i-cowberry, idibaniswe ngokufanelekileyo kunye nemifuno kunye nenyama, kuba ukugaya kwazo kudinga i juice yesisu esiswini se-acidity. Wonke umntu uyazi ukuba kufuneka uphume etafileni unomdla omncinci, kodwa kukho konke ukubonakala okulula kwalo mgaqo, akulula ukulandela. Indoda yanamhlanje idla ngokutya ngokukhawuleza. Abanye bethu bahlala behlaziya into ethile, eneneni bengenakuvakalelwa yindlala, okanye ukutshintsha i-saturation yayo. Abanye ngenxa yezizathu ezithile badla ukutya kwaye badla kanye kuphela ngosuku ngemini, xa bahlaselwa ngokukrakra ukutya kwaye abanako ukuyeka. Asikwazi ukubaphulaphula njani iimvakalelo zethu. Ngoko ke, etafileni asigxila kubo, kodwa ngendlela abahlobo abaziphatha ngayo (bagqibile ukutya okanye bathatha enye inxalenye). Okanye umlinganiselo wokutya osele kwisiqwenga. Ukuba le nto ingxaki yakho, zama ukucwangcisa kwangaphambili ukuba ungadla kangakanani. Ukunamathela kwindlela ethile yokutya, sebenzisa izikiti zekhishini (de ufunde ukucacisa ubukhulu besahlulo ngeso), faka ukutya kwisitya esincinci okanye, ubeke kuyo ngokukhawuleza njengoko uyifunayo, ngokukhawuleza ucime malunga nesiqingatha.
Ikhalenda yokutya ngo-Matshi 2014: ukunciphisa umzimba ngokuchanekileyo
Iipropati eziwusizo zepepper yaseBulgaria
Ukuxilwa kolwimi nge-dysarthria
Iindlela ezintsha zonyango lokuhluthwa
Ilifa lezilwanyana zaseAsia: isaladi isaladi isaladi
Shish kebab nge kiwi
I-Cocktail Blue moon
Iimpawu zokungqinelana kwabantwana